Ruva goridhe simbi tambo yeako Apple Tarisa | Ndinobva mac
Ruva goridhe simbi tambo yeako Apple Watch
Zvekare zvakare tinopedza zuva nechisarudzo chitsva cheako Apple Watch. Mune ino kesi, izvo zvandiri kuda kukuratidza ndeye tambo iyo shamwari yangu huru Magüi Ojeda akandiudza kuti ndinyore kuApple Watch yake. Ichokwadi ndechekuti tambo yakasarudzika yakafanana neiyo yakaratidzwa neApple panguva iyoyo, asi chokwadi chekuti iri mu rose rose goridhe uye kuti ine yakatanhamara dhizaini dhizaini inoita kuti ive yakakosha.
Uye zvakare, ini ndoda kugovana newe kugutsikana kukuru kunonzwa naMagüi neayo 2mm Apple Watch Series 38 mugoridhe. Pakutanga aisaziva kana chigadzirwa ichi chaizomubatsira uye ikozvino anondiudza kuti anoda ichi "chinhu".
Iyo tambo yandinokuratidza mune ino chinyorwa yakagadzirwa ne rose goridhe-yakafukidzwa simbi saka inopa yako Apple Watch kutaridzika kwakanaka kwazvo. Panyaya yaMagüi, aida kusanganisa ruvara rwegoridhe rweApple Watch yake neroridhe goridhe tambo iyi.
Une mavara mana aripo, pakati pavo pane nhema, sirivheri, goridhe uye rose goridhe. Ivo vese vanounzwa nesimbi yakabwinyiswa pedza uye vane mutengo we15,34 euros. Unogona kuiwana kubatana uku Saka kana iwe uchida kupa yako yakanaka Apple Watch chimiro chitsva, tinokurudzira kuti iwe uite iwo iwo marongero akafanana naMagüi.
Iwe unofarira tambo iyi here? Unoona here kuti mutengo wayo wakagadziriswa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ruva goridhe simbi tambo yeako Apple Watch
Nyatsoita tambo !!!
Pindura kuna maguigc
Akataura nezve huremu hwetambo iyo?
Wakaona here mari yekutumira yeiyo tambo mune iyi link yakapihwa?
Pedro Rodas akadaro
Mhoro ndatenda nekuverenga isu! Tambo iri pakusvika uye nezve yekubatanidza, regerera asi ndeichi: https://es.aliexpress.com/item/2016-Beat-selling-Metal-Stainless-Steel-Watch-Strap-Band-for-Apple-Watch-Band-38mm-42mm/32705827218.html?spm=2114.13010608.0.0.PPkcLC
Pindura Pedro Rodas
Iye zvino ndiri kuona mutengo maererano nezvimwe zvinopihwa. Ini chaizvo ndinoda kuziva huremu hweiyo tambo.
Zip uye password chengetedza mafaera kana maforodha nekukurumidza neZipEnc
Maitiro ekuisa pikicha mifananidzo mu Skitch yeMac